ए सानो मान्छे | Purna Oli Free songs
Home / लेख/आलेख / ए सानो मान्छे
ए सानो मान्छे
Posted by: Purna Oli in लेख/आलेख, विविध September 22, 2020	0 295 Views
ए सानो मान्छेयो संसारमा तिमीजत्तिकै राम्रो कुन छ ? तिमीमै शितल जून जस्तो गुण छ । तिमीमै सुनौँ सुनौँ लागिरहने मीठो धुन छ । तिमीमा शुद्ध खुन छ । त्यसैले पनि मलाई तिम्रै संगत असाध्य मन पर्छ ।
उसै त सानोमान्छे म । तिम्रै अनुहार र व्यवहारले आकर्षित गर्छ । बदलामा तिमीजस्ता सानै मान्छेहरुले धेरै मन पराउँछन् मलाई । सानाहरुको समूह झन् सानो हुन्छ । सानाहरु यति साना हुन्छन् कि आँखामा पनि बिलाइदिन्छन् । मुटुमा पनि अटाइदिन्छन् । मनमा सजिलै भिजिदिन्छन् । छातिभरि फिँजिइन्छन् । सानै प्रयासले रिझिइन्छन् ।
ठुल्लिएका ठूला मान्छेहरु जति सस्तो अरु कुन छ ? कतै अटाउन नसक्ने तर बिझाउन वा तर्साउन मात्र गुण छ । बिग्रिएको अशुद्ध खुन छ । मुटुभरि नुन र चुन छ । ठूलोमा उपेक्षा, उपहास, रिस र घृणाको थुप्रो ठूलै हुन्छ । सानोमा त माया र विश्वास मात्र अट्ने मुटु पनि खुलै हुन्छ । विकारहरुको बन्धन कहाँ हुन्छ ?
सानामै छ सुन्दरता र सरलता । सानामै छ शान्ति र निश्चलता । ठूलाका अगाडि सानाहरु झन् साना भैदिएकैले तिनीहरु झन् ठूला देखिएका हुन् । नत्र त ठूलाहरुजत्तिकै सानो त को हुन्छ ? ठूलाको आँखा सानै हुन्छ । ठूलाको मन झन् सानो हुन्छ । ठूलाको मुख सानै हुन्छ । चित्त पनि सानै हुन्छ र पित्त पनि सानै हुन्छ ।
ठूलाहरुको बीच ठूलै पर्खाल ठडिएको हुन्छ । सानाको बीच सानो ढिस्को समेत हुँदैन । फलस्वरुप जता पनि पुग्न सक्छन् । सानाको आवश्यकता पूरा हुन सानै समय भए पुग्छ । ठूलाको रहर र हर गर्जो टार्न पो ठूलै समय खर्चनुपर्छ । ठूलाजत्तिकै जता पनि स्याउँस्याउँति भेटिँदैनन् साना मान्छेहरु ।
कुनै आकारले तुच्छ भए पनि अहंकारले उच्च कहलिन्छन् । कुनै व्यवहारले निच भए पनि विकारले उँच कहलिएका हुन्छन् । जति ठूलो, उति दूलो । ठूलाहरु झन् ठूला र सानाहरु समेत ठूलै भैदिएपछि त सानो मान्छे पाउन पनि मुश्किल हुन्छ । किनकि ठूलो मान्छे बन्नु जत्तिकै ‘सजिलो’ सानो मान्छे बन्न कहाँ हुन्छ ?
ए ठुल्लिएका ठूला मान्छेहरु हो, सानो मान्छे बनी त हेर । सानो हुनु जत्तिको मज्जा अरु कुन छ ?
Previous: उहाँ र म
यालमाया र जितौरीपछि ‘घमण्डी स्यालको कथा’
Archives Select Month June 2021 May 2021 April 2021 March 2021 February 2021 January 2021 December 2020 November 2020 September 2020 June 2020 May 2020 April 2020 March 2020 January 2020 September 2019 August 2019 July 2019 June 2019 May 2019 April 2019 March 2019 January 2019 December 2018 October 2018 September 2018 July 2018 March 2018 December 2017 November 2017 October 2017 August 2017 July 2017 March 2017 February 2017 January 2017 December 2016 November 2016 October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015